लिटरेचर फेस्टिभलमा नारायण वाग्ले र खगेन्द्र संग्रौलाको ठट्टाः बाँयापट्टी रातो झोला खै ? खुइलियो ! – ई-सरोकार न्याय र समताको संवाहक
December 23, 2018 सरोकार संवाददाता
पोखरा पुस ७, । साँझ पर्दै थियो, चिसो बढ्दै थियो तर, फेवाताल किनार भने रोमाञ्चक बन्यो । लिटरेचर फेस्टिभलको पहिलो दिनको अन्तिमतिरको सत्रमा सम्पादक वाग्ले र स्तम्भकार संग्रौलाले आत्मलोचनासँगै ठट्यौलीपारामा गम्भीर विषयमाथि कुराकानी गर्दा माहोर रोचक बनेको थियो । दुई लेखक-स्तम्भकारले एक अर्काको प्रसंशा मात्रै गरेनन्, एकअर्काको कमजोरी पनि खोतले । उनीहरुले छापा माध्यमका लेखन र भागाई सुनाए । एक अर्काले मजाले मन माझे, आत्मलोचना गरे ।
‘तपाईंको रातो झोला खोइ ?’ प्रश्नसँगै कार्यक्रमस्थल रोमाञ्चक बन्यो, हाँसो गुञ्जियो । ‘मेरो पहिचानका ३ बुँदा छन् । निख्खर सेतो कपाल, ढ्याके चस्मा र झोला । त्यो रातो झोला म जस्तै खुइलियो,’ जवाफसँगै फेरि हाँसो थपियो । सम्पादक नारायण वाग्लेले प्रश्न र काँधको बाँयापट्टी रातो झोला झुन्डाइहिँड्ने खगेन्द्र संग्रौलाको जवाफ थियो ।
कैंची चलाउने सम्पादक र आलोचनात्मक स्तम्भ लेख्ने स्तम्भकारको भलाकुसारीले नेपाली छापा माध्यम, सम्पादन, प्रकाशकको भूमिका, स्तम्भकार र पाठकसम्म बुझाउने काम गर्यो । एक-अर्कालाई गरेको प्रश्न र स्पष्ट जवाफले दर्शकको मन जिते ।
कान्तिपुर दैनिकमा तीन सम्पादकसँग काम गरेका संग्रौलाले स्तम्भ नछाप्नेदेखि आफ्नो हिसाबले काँटछाँट गरेको भन्दै व्यंग्य गरे । सम्पादक वाग्लेले कुन-कुन परिस्थितिमा स्तम्भमा कैंची लाग्यो भन्ने सुनाए । सम्पादकको धर्म र स्तम्भकारदेखि फेसबुक, टि्वटरसम्मका प्रभावमाथि उनीहरु गफिए ।
शालिन र शान्त स्वभावका देखिने संग्रौला स्तम्भ चाहिँ निकै कडा लेख्छन् । यही कुरा कोट्याउँदै वाग्लेले प्रश्न गरे, ‘खगेन्ऽ दाइ मान्छे निकै शालिन, शान्त स्वभावको हुनुहुन्छ तर, लेख्ने बेलामा अर्कै खगेन्द्र कसरी बन्नुहुन्छ ?’
संग्रौलाको उत्तरले सत्रलाई रसिलो बनायो । हरेक मान्छेका जीवनमा विरोधाभास हुने संग्रौलाले सुनाए । ‘हरेक व्यक्तिका विभिन्न रुपहरु हुन्छन् र यी मेरा दुई रुप हुन् । बाँकी साहित्य लेखिरहेको बेलामा लालित्यपूर्ण भाषा प्रयोग गर्छु, विम्ब प्रयोग गर्छु, रुपक प्रयोग गर्छु, प्रतिक प्रयोग गर्छु,’ संग्रौलाले भने ।
आलोचनात्मक लेख लेख्ने संग्रौलाको आलोचना गर्ने पनि प्रशस्त छ । स्वार्थ विभाजन भएको समाजमा समर्थन र विरोध दुवै हुने संग्रौलाको भनाइ थियो । ‘समाजमा अन्याय देखेपछि वा आफुले काँधमा बोकेर सत्तामा मान्छे-मान्छे जस्तो चढाइयो, चढेपछि सुँगुरजस्तो देखियो,’ संग्रौलाले भने, ‘त्यो भएपछि मेरो मनमा यस्तो आक्रोश र आवेग उत्पन्न हुन्छ ।’
कुनै पनि आर्टिकल नछापी रोक्नुपर्दा सम्पादकलाई चोट पर्ने वाग्लेले सुनाए । स्तम्भ सम्पादन गर्नु पर्ने, रोक्नु पर्ने अवस्था मिडियाको पोलिसी र परिस्थितिले पैदा गर्ने वाग्लेको भनाइ थियो ।
साया भण्डारी र मिलन क्षेत्रीको मायामा किन भयो ? “ कन्फयुजन ” हेर्नुहोस भिडियो सहित